Izindaba ezifakiwe - The UnCommission
Ababalisi bezindaba basenhliziyweni ye-UnCommission. Yizwa ngqo kusuka kubantu abasha kulo lonke elase-United States mayelana nokuhlangenwe nakho kwabo komuntu siqu ngokufunda kwe-STEM.
Okulandelayo yisampula esincane salokho esizwa ngakho i-unCommission futhi izobuyekezwa njalo.
Markus (he/him/his), 26, Minnesota
“[The assistant principal] pointed me out and said, ‘I seen you skipping class in the hallway’… she [had] mistaken me for someone else…And I happen to look like one of them.”
Ikilasi likaDkt. C leBanga lesi-6 leSayensi
UPeyton (yena), oneminyaka engama-23, eLouisiana
“Ngibonga uDkt. C ngokungethula kwisayensi ngendlela efanele…Lokho kwaqinisa umqondo ekhanda lami wokuthi ngizophishekela umsebenzi wami kwezesayensi, futhi ngangizofunda ukuthi umhlaba uyasebenza.”
UTaina (yena), 20, eFlorida
“Lokhu kushisekela kusenhliziyweni yami nanamuhla futhi kuyangikhuthaza nsuku zonke ukuthi ngibe uthisha onobuchule ongazisa abantu ngokushintsha kwesimo sezulu, kuyilapho ngibanikeza amandla ngezisombululo eziya emgomweni wethu wobunye wokuhlala endaweni engcono.”
Okuhlangenwe nakho Kwami nge-STEM
UGabrielle (yena/bakhe/bona/bona), 22, eTexas
“Nakuba uthisha we-STEM ake waluqeda uthando lwami lwesayensi, kwakungomunye uthisha we-STEM owakwazi ukukhulisa uthando lwami lwesayensi emuva ekuphileni.”
Akukho ubuchopho bezibalo
U-Elena (yena), oneminyaka engama-22, eNew York
“Akuyona nje into engicindezelayo engqondweni. Anginawo ubuchopho bezibalo.”
U-Ephraim (yena/yena), oneminyaka engu-18, eTexas
“Lo thisha ubeyiciko. Ngeke ngimkhohlwe ngoba ube nomthelela omkhulu empilweni yami.”
Yazmine (yena/hers), 16, Arizona
“Ngicabanga ngomsebenzi wami webanga lesikhombisa noma nini lapho ngiyofunda izifundo zami zesayensi… Ngangingazizwa ngihlukanisiwe futhi nginomuzwa wokuthi akufanele ngibe lapho. Bekungokokuqala ngqa lapho ngizwa khona ukuthi yonke into inendawo nokuhleleka.”
Ukumelwa vs. Ukugcinwa
U-Alexis (yena/wakhe), oneminyaka engama-25, eNew York
“Ukumela kungase kube ingxenye elula. Singathola abantu emnyango, singathola abantu beza, singathola abantu bezwe izindaba zethu, singathola abantu ku-STEM, singathola abantu ku-science, tech, engineering kanye nezibalo, kodwa singabathola uhlala?"
Intombazane Ekudizayini Yegeyimu
UDaijya (yena/wakhe), 18, Missouri
“Ngingowesifazane oyikhaladi ongenela umkhakha abantu abaningi abangamukelwa kuwo noma abangavunywanga kuwo.”
Ukuguqula intombazane ibe owesifazane wesayensi
UJordani (okwakhe), 21, eTexas
“Ngikhumbula uthisha wami wesayensi efunda ibanga lesithupha waletha amanzi ahlanzekile esiphethwini ayevakashele kuwo wonke umfundi ekilasini ukuze azame uma bethanda…kwangimangaza ngempela ukuthi lezi zinto zikhona nokuthi uMhlaba wawungasinika ukudla. ngendlela engenzeka ngayo.”
UMariam (owakhe), oneminyaka engama-22, eCalifornia
“Futhi wathi, 'Awu, iseluleko sami kuwe esokuthi yeka ikilasi lami, ngoba akulona elakho, awukho ekilasini lami, udinga ukuya ekilasini lezibalo eliphansi.' ”
Ukuba Isisebenzi Ngokuzikhandla
UDanielle (yena), oneminyaka engu-19, eCalifornia
“Lapho ngifunda isifundo sami sokuqala sebhayoloji, inhliziyo yami yashona phansi. Ngangingazi ukuthi uprofesa wami ukhuluma ngani futhi kwakubonakala sengathi bonke ontanga yami benza kanjalo.”
Bheka Izindaba Eziningi